Tsy Takatry Ny New York Times Ny Loza Mety Ateraky Ny Taratra Ao Fukushima – Bilaogera Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2013 22:34 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, Español, русский, English
Nahitana fahavakisan-drano efatra hafa tao amin'ny rano efa voapoizina ao anatin'ny siniben-dranon'ny tobim-pamokarana angovo nokleary ao Fukushima Daiichi, hoy ny tatitra nataon'ny Tokyo Electric Power Company (TEPCO) [Orinasan'Angovo elektrika Tokyo] [ja]. Ny haavon-taratra faratampony hita dia “1800 millisieverts isan'ora fatra mitovy amin'ny 70 mikrometatra” tamin'ny fanambanin'ny siniben-drano vondrona B ao amin'ny faritra H3.
Raha nitsapa ny haavon-taratra tamin'ny fanambanin'ny siniben-drano ny TEPCO tamin'ny 22 Aogositra 2013 dia 100 mSv/ora izany. Saingy ny valin'ny tamin'ny 31 Aogositra kosa namoaka fa 1800mSv/ora mitovy amin'ny 70 mikrometatra izany. Sary nopihana tamin'ny 22 Aogositra, avy amin'ny antota-taratasin'ny TEPCO
Ka mampihoron-koditra tahaka ny ahoana moa izany “1800 millisieverts isan'ora fatra mitovy amin'ny 70 mikrometatra” izany? Nolazain'ny New York Times fa “ampy hahazaka fatra mahafaty ao anatin'ny ora efatra” izany, saingy nitsikera ny fampitam-baovao fanaraky ny besinimaro tamin'ny finiavana hanaisotra ny voalazan'ny “fatra mitovy” ny bilaogera tsy nitonona anarana mibilaogy ao amin'ny ex-skf.blogspot.jp ka mandiso hevitra ny mpamaky amin'ny fanafangaroana ny firantirantiana amin'ny taratra gamma, izay malaky miditra aoka izany ary miditra lalina amin'ny mason-koditr'olombelona, sy ny firantirantiana amin'ny taratra beta, izay maivana kokoa ary tsy manana fitsofohana tahaka izany.
Manazava ilay bilaogera ao amin'ny ex-skf.blogspot.jp :
Ny 1800 millisievarts isan'ora dia “fatra mitovy amin'ny 70 mikrometatra”, ho fanehoana ny firantirantiana amin'ny taratra beta raha tena akaiky tokoa ho an'ny taova manokana – hoditra sy soso-koditry ny voamaso.
Ny “1800 millisievarts isan'ora izay mety hahafaty olona ao anatin'ny efatra ora” dia ny taratra gamma.
Eto ny rano nampiasaina dia tena betsaka nokleida beta izayahitana strontium fa tsy betsaka nokleida gamma. Tsy ho faty ho azy eo akaikin'io rano io ao anatin'ny ora efatra ianao.
Ny fatra mitovy amin'ny 188 millisieverts isan'ora dia mbola avo dia avo tokoa, satria ny fatra mitovy faratampony zakan'ny hoditra isa-taona dia 500 millisievarts. Ny mitovy aminy ho an'ny sos-koditry ny voamaso dia 300 millisieverts.
Fa ny finiavana hanadino ny voalazan'ny “fatra mitovy” ao amin'ny fampahafantarana navoakan'ny TEPCO sy ny fanampiana filazalazana manaitaitra fa mety hahafaty olona ao anatin'ny efatra ora dia fahambaniana hafa ho an'ny fampitam-baovao.